ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကိုဖန်တီးရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
3 အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Profile ကိုဖန်တီးရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အွန်လိုင်းတစ်ဦးချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားလုံးတပြိုင်နက်တစ်ခု EXIT နှင့်ကြောက်စရာစိတ်ကူးနှစ်မျိုးစလုံးရှိနိုင်ပါသည်. စိတ်လှုပ်ရှားသိသာလိမ့်မယ်သင့်ဟုထင်ရသောနယ်နိမိတ်-လျော့နည်းအင်တာနက်ကတဆင့်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းအံ့သောငှါအတွေးမှလာ. ကြောက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းတွင်ထားရန်အတိအကျဘာကိုစဉ်းစားလာ၏အတွေးမှလာ. သင်လူအများစုကတူတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်နိုင်၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုမှုကိုရှေ့သို့သွားစေလိုသော, သင်မူကား, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိမ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြခြင်းအဆင်မပြေမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောနိုင်ပါတယ်. တက bit နဲ့တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာအတွက်အဖုံးရေးသောစာတူပုံရပေမည်နေစဉ်, တကယ်တော့သင်အမှန်တကယ်အလားအလာရက်စွဲများ-မအလားအလာအလုပ်ရှင်မှအတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဖြစ်နေဆဲ! သောကြောင့်သည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးတဲ့ရှုပ်ထွေးထွေး, တဦးတည်းရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ profile များကိုရေးသားခြင်းမှကျူးလွန်ကုမ္ပဏီအများအပြားကအမှန်တကယ်ရှိနေပါသည်. ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည် "ငါ့အကြောင်းကို" သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း / စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာအပိုင်းပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိပါတယ်, သင့်အဘို့အသာလုပ်ပါဖို့ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" ဆပ်ဖို့မလိုဘဲ.
ပုံပြင်ကိုပြောပြပါ: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပရိုဖိုင်ကိုရေးအကြံပြုချက်၏တဦးတည်း, သင့်ရဲ့ profile တွင်ပုံပြင်များပြောပြကျိန်းသေမှာအနည်းဆုံးသင့်အကြောင်းပိုမိုသိလာအောင်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒအတွက်လူခပ်ရန်တစ်သက်သေနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောငါကောင်းတဲ့င် "အဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ, ပျော်စရာ, စွန့်စားသူတစ်ဦး "ယေဘုယျဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာဖော်ပြခဲ့. သို့သော်, သူတို့အားဖော်ပြချက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုကိုယ်စားပြုဖို့အကျဉ်း anecdote များကိုရွေးချယ်ရာတွင်သိသိသာသာ ပို. မှတ်မိနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်စေမည်. (ဥပမာအားဖြင့်, "တစ်ဦးကအချိန်ကျေးလက်ဒေသဂါနာ၌ရှိနေစဉ် ... "). ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်အတိုချုပ်ကိုဤပုံပြင်များစောင့်ရှောက်သောအဓိကသော့ချက်က; မသာဒီကိုအလွယ်တကူဖတ်​​လို့ရအောင်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile စောင့်ရှောက်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ရက်စွဲတစ်ခုစကားလက်ဆုံခေါင်းစဉ်တစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ပါသည် ("... ဒါကြောင့် ... ထိုကာလသင်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုပြောပြ"). ဒီလိုလုပ်ဖို့အခြားသောလမ်းရိုးရှင်းယေဘုယျထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်တိကျသောဥပမာများကိုပေးစွမ်းရန်ဖြစ်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, "တစ်နေ့နေ့တော့ကိုယ်တည်းဟူသောသင့်ကိုငါ့လက်မှတ် BBQ နံရို​​းနှင့် coleslaw စေမည်အကြောင်း" ဟုဆိုဟု ဆို. ထက် ပို. မှတ်မိနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်, "ငါကယ့်ကိုငါ့ကင်ပေါ်ပြင်ပချက်ပြုတ်လို။ "
မေးခွန်းများ Invite: တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးအချက်သဘာဝတက်လိုက်နာကျင့်, သင့်ရဲ့ profile ကိုသင်ချိန်းတွေ့မေးခွန်းများမေးရန်တခြားသူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးကြောင်းသေချာပါစေ. တိုက်ရိုက်မဖော်ပြထားပဲဖြစ်ဖြစ် (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, "နှင့် ပတ်သက်. တဖန်ငါ့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့မလေးပါ ... ") သို့မဟုတ်ရုံမျှသာပရိယာယ်သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုလေသည်, သင်နှင့် ပတ်သက်. တိကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့စုံစမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့ profile ကိုသင်ပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြသ, အဖြစ်ကောင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုအသံတွေ၌ရေးထားသမျှသောစတိုင်ဿုံပြီးပြည့်စုံလျှင်ပိတ်, ထို့နောက်အခြားသူများကိုကိုသင်တို့အားလွန်းဖြစ်ကြ၏လမ်းင်ထင်စေခြင်းငှါ,. ပွင့်လင်းနှင့်တူသောအသံကိုလွှင့်အားဖြင့်ပွင့်လင်းသင့်ချိန်းတွေ့ options များ Keep, လူတစ်ဦးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း.
ရိုးသားစွာဖြစ်: နောက်ဆုံး, ရိုးသားမှုသိသာမဆိုအောင်မြင်သောချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံကိုတဲ့ key ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်စေ. သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ရုံမျှသာအဖြစ်မှန်၏ပုံကြီးချဲ့ဖြစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ် "ကျွမ်းကျင်မှုကို" overemphasize မှကဲ့သို့သောလမ်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဆိုရင်, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအခြားသူများကိုဖြစ်နိုင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်. မရိုးသားမှုဆက်သွယ်ရေးပယ်အပေါ်စတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးကိုခြေဘယ်တော့မှမဖြစ်. သို့သော်, ဒီကသင်တစ်ခုခုကိုအွန်လိုင်းသင့်ပညာရှင်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပေးသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ဥပမာအားဖြင့်, ကြောင့်အခြားသူများကိုရိုးရိုးသင့်ဝင်ငွေအဘို့အရက်စွဲခြင်းငှါသင့်ကိုရှာကြလော့အံ့သောငှါစိုးရိမ်မှုတွေမှသင့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ကိုဖော်ပြလိုသောမသာပြည်နယ်မှခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်, အစားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ပြချက်တွင် "အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်" ၏ "ဆေးပညာမှာ". ဒါဆိုရင်, ကြိုးစားမှုသင်အဖြစ်မှန်ထက် "ပိုကောင်း" အသံသည်နေသောသူလုပ်ရကြပြီမရှိ.
7 အရုပ်ဆိုးအမှားအမျိုးသမီးများဒါကပျက်စီးခြင်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေး၏မဆိုအခွင့်အလမ်းတွေကို Make